FIFA-CAF, ole nkewa? - GHỌRỌ AYBỌCH.
FIFA-CAF, ole nkewa?
Sipandang, Eprel 21, 2020. - Nsogbu nke dakwasịla ụlọ ọrụ abụọ a kemgbe ọtụtụ ọnwa ugbua bụ ebe juru ebe niile. Ọ bụghị nke mbụ na FIFA na-eme ihe ngosi na ndị CAF, na-agbagha iji gosipụta echiche ya, ọ bụghịkwa nke mbụ ya CAF na-ekwupụta afọ ojuju ya. Ma ochie egwuregwu mgbe, ọ ga-amata, na speilled foil. Oge a, saber doro anya, ihe FIFA ọ dị ka ọ dị njikere maka heck.
N'akụkụ nke CAF, Maazị Ahmad Ahmad, onye isi ya, Mazị Samuel Eto'o, amachaghị nke ọma maka mkpebi ikpe ya, o yiri ka ọ ga - enwe usoro ịgba ochie mgbe otu puku mgbe anụ ọhịa wolf na - acha ọcha na-agba mbọ bụ onye chọrọ wetara ya ga ndi ogbenye ojii nke Afrịka.
Ọnọdụ dị ka ndị a: CAF gbajiri. Akụrụngwa ego ya bụ, dị ka onye isi ya, ndị CAN ka ìgwè 24 dị iche iche ahaziri afọ abụọ ọ bụla. na FIFA bara ọgaranya ma na-emesapụ aka, mana iwe abụghị naanị na ihe ndị ọ na-enyocha anaghị adịkarị ka ejiri ya maka njedebe ebumnuche ha, kamakwa nke morgue na-enweghị isi nkwado dị mma na CAF na-egosiputa oge obula ikwesiri ikwesi ntụkwasị obi ya ike.
Kedu ihe ọ bụ n'ezie ? Na CAF bu n'obi ịhazi ndị CAN kwa afọ abụọ ; ihe FIFA ga-amasị ka emee ihe omume a kwa afọ anọ. Ekwere m na blaster ahụ adịchaghị ebe ahụ. Ezigbo nsogbu bụ ịnye ego bọọlụ na Afrịka, ọkachasị na ndị isi ojii Africa. na FIFA Anaghịzi achọ ka ahapụ ya.
Kedu ihe kpatara na ọ gaghị enwe ikike inupụ isi, a na m arịọ gị ? Ana m echetara gị na ọ kwụrụ ihe karịrị $ 50 nde nye CAF afọ abụọ gara aga. M na-ewetara gị eziokwu ọzọ: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke nchikota a adịghị ka ejirila ya maka ebumnuche ebumnuche ahụ, na nke ka njọ, ọ dịghị onye maara n'ezie ebe ego a gara, ọ bụrụgodị na anyị maara na o nwere onye furu efu mmadu niile. na FIFA nwere ikike ịnụ ya niile. Onwe m, mgbe m tinyere nde 50 na ikpe, ịkwesighi ịchọ m. N'ihi na ọ bụrụ na ha na-achọgharị m, ha na-achọta m.
Hazie a CAN Abụọ iri abụọ na anọ kwa afọ bụ ihe nzuzu, a gha agharị ọgụ
Inye ego mmepe na Africa Africa bu ezigbo nsogbu. Ala Africa, ntakịrị na ego onwe ha na nke ukwuu na ihe ndị onyinye nyere ha, na-eme ike ha iji wuo okporo ụzọ na ụlọ ọgwụ na, eeh. ! ịhazi na itinye ego maka ọrụ mmekọrịta dịka bọọlụ. N'Africa, gọọmentị na-akwado bọọlụ. Otu nwere ike ịnọ na-eche ihe bụ ebumnuche nke CAF mba ndị otu, ndị ọrụ ha bụ n'ụzọ doro anya iji belata ibu nke na-eleba anya na steeti ndị Africa site na ịchọta ego onwe ha.
Lyinggha poker bluff na CAN bụ ime ka gogos kwenye na nhazi nke asọmpi a bụ ihe dị mkpa nke mmepe na mba anyị. Kedu nke abụghị eziokwu. Abụọ ma ọ bụ atọ nke ámá egwuregwu ọhụrụ, okporo ụzọ ole na ole ọrụ, ụlọ oriri na ọ hotelụ orụ ma ọ bụ abụọ, iko ole na ole nke ndolé na azụ nwere ọnụ ahịa, hectolite ole na ole nke biya biya, na nke ahụ bụ ya. Ekwenyesiri m ike na iwu nke okporo ụzọ dị ugbu a n'etiti Kribi na Ebolowa, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịkwalite mmepe pụtara ìhè nke mmetụta ya ga-enwe mmetụta ruo ọtụtụ iri afọ. Kedu ihe nke a CAN, nke na-etinye anyị n'ime eriri ọkụ, agaghị enye ọlị.
N'ezie, mba ndị na-ahazi na-akwụ ụgwọ ụgwọ, na CAF na-apụ n'anya na ndekọ ego. Ya mere chee echiche: afọ abụọ ọ bụla, steeti enweghị ụtụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke na - enweghị ike imeziwanye ọnọdụ nkịtị nke ndị bi na ha, ga - adọpụ akụ dị ukwuu site na nsọtụ akụ na ụba na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Maka ndekọ ahụ, nke steeti iri anọ na ise ndị ga-akwụ ụgwọ n'Africa, naanị 45 nwere ikike ịhazi a CAN usoro ọhụụ na-enweghị ọtụtụ mmebi.
Hazie a CAN Abụọ iri abụọ na anọ kwa afọ bụ ihe nzuzu, a gha agharị ọgụ. Ọbụghị naanị na nke a na - enyere aka ịbelata obi ụtọ nke otu nnukwu mmiri na - agba mbọ ịmanye onwe ya na ọnọdụ mba ụwa, mana ọ na - ewetakwa steeti anyị nsogbu. na CAF na ndị otu mba nwere ebumnuche ha iji dochie States n'oge dị anya site na iweta ụlọ ọrụ nzuzo, nke na-erite uru na football, na-ahụ maka ịkwado ego maka ọrụ a. Nke ahụ, ọ bụ ihe nwute, adịghị ka ọ dị nso ịbịaru ebe anyị, ebe Fécafoot na ndị ọrụ obodo na-anọgide na-enwe ihe ọjọọ nke Ọchịchị niile na football.
Dị ka ihe akaebe, omume ịchebe General Semengue n'oge na-adịbeghị anya. Site na nkwenye na-edu ndị National Professional Football Njikọ n'agbanyeghị ndụmọdụ m, onye isi ahụ lụrụ ọgụ na-eyi egwu karịa. ZOPAC na Sanaga-Maritime na 1960. Fécafoot chụrụ ya n'ọrụ maka ibido ezi usoro na mgbanwe dị mkpa nke ịmanye klọb bọọlụ ịgbakwunye ịnata enyemaka enyemaka steeti. Ọchịchọ maka ị nweta ihe doro anya na obere ngosipụta maka iji ihe ndị eji eme ihe emeghị obi ụtọ.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.camfoot.com/point-de-vue/fifa-caf-combien-de-divisions,30613.html
Mali: mgbe Donald Trump nyere iwu ka nyochaa nyocha Minusma
Nyochaa Galaxy Z Flip: dị mma, mana ị nwere ike ịchekwa ego gị